महामहानव वीपी कोईराला र राष्ट्रिय सन्तुलन - Global Awaj | No 1 News Portal from Nepal in Nepali
बेहुला बने मुख्यमन्त्री राई
महामहानव वीपी कोईराला र राष्ट्रिय सन्तुलन
३० भाद्र २०७७, मंगलवार ०६:३७
विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला नेपाल भित्र जन्म लिएका प्रतिष्ठित लेखक तथा प्रजातन्त्रका पिता स्वाभिमानी व्यक्तित्व विश्वभर चिर परिचीत नेपाली सपुत स्वाधीनतावादी पात्र हुन् ।
वीपी काेईराला दशकौंदेखि चर्चा परिचर्चा र सबैको मुटुभित्र अटेको एउटा राष्ट्रप्रेमि गुणी सर्वचिन्तक पात्र समेत हुन् ।
महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला कुनै पनि नेपाली नभई अन्य मुलुक भित्रका मानिसका पनि मनमष्तिस्क सम्ममा अटेका व्यक्ति थिए । उनी एक महान प्रजातन्त्रवादि योद्दा , तर्कविद, शाहसका धनी, सहिष्णुतावादी नेता थिए ।
साहित्यका धनी महान श्रष्टा विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला सोचनशील, असल कुटनीतिज्ञ पनि थिए । उनका राष्ट्र निर्माण गर्ने सोच अपारताभित्र पर्दछ ।
नेपाल देशका जननायक उनी विद्ववधाताका प्रतिक पनि हुन् । जब नेपालमा उनको उदय भयो उनको माटो प्रेम र लोकप्रियता माथि दायाँ बायाँबाट गिद्दे दृष्टि सक्रिय हुन थाल्नु त आहान पुष्टि हुन्छ । उनले चालेका कदम, उनले गरेका चित्रण, उनका परिकल्पना, उनको दौंत्य सम्बन्ध कायम राख्ने सोच र नेपाली माटोलाई उर्वता फैलाउने मुटुको प्रणबाट केहि तत्व देशी विदेशी अतालिएको तलाउमा गएर तालुमा पानी ठोक्न पुगे । तै पनि उनको शाहसीक कदम लोकप्रियताबाट सबै परास्त हुनु स्वभाविकताले बास गरेको ठहर हुन्छ ।
वीपी एक आदर्शी र मर्यादित उच्च विचारको खानी थिए । वीपीको एउटा पवित्र मानसिकता भनेको देशलाई अछ्युन्न राख्नु र समाजवादमुखी राष्ट्र बनाउनु हो र राष्ट्रियताको विगुल पनि फुक्नु हो । आदर्शवादी नेता वीपी भन्ने गर्दथे, “मुलुक भनेको सबै नेपालीको साझा घर हो धर्म, संस्कृति, सम्पदा आदीको जर्गेणा र हानी नोक्सानीमा सबै नेपालीको चित्त दुख्नुमा नै राष्ट्रियता झल्किनु हो ।”
त्यस्तो व्यक्तित्व एक सरस्वतीका वरदपुत्र हुन भने अर्को तर्फ उनमा अतिवादी सोच थिएन । वीपीसँग दमननीति पनि थिएन । निरंकुसताको विरुद्द उनी एक सिङ्गो मानवताका रुपमा परिचित थिए । समानदृष्टि दिन उनी कदापी पछि नपरेकाे अनुभव छ ।
राष्ट्रियताको सवालमा वीपीबाबु कतै कोहीसँग झुक्न जान्नु भएन । राष्ट्रियताको सवालभित्र उनको अडान हिमाल सरह थियो । वीपी भन्ने गदर्थे, “देश महान हुन्छ , समाजवादभित्र शान रहन्छ ।”
वीपीको क्रान्ति निस्वार्थ भित्र थियो । उनीसँग भएका गुण र व्यहोरा नियाल्दा देशमुखी जनमुखी व्यक्तित्व देखिन्थ्यो । असमानतावादीलाई पाखा लगाउने कार्य भन्दा पनि उनी त्यस्तालाई समाजवादी राष्ट्रमुखी बनाउनेतर्फ ध्यानस्थ थिए ।
वीपी सत्य उत्तरका धनी पनि थिए । वीपी माथि जुन बखत कुठाराघातले प्रवेश पायो त्यसले प्रत्येक नेपालीमा चोट पुग्यो ।
वीपीमाथि जुन प्रकारको षडयन्त्र भयो त्यो र्दुभाग्यता थियो । राज्यभित्र उनलाई सनैसनै आफ्ना नक्कली अनुयायीहरुबाट धोकाका पवन चलाईयो वा चलाउने कोशिस गरियो, नेपालीको भाग्यमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्यो ।
अन्त्यमा राम्रा कुरा र सत्यको प्रशंसा हुनु स्वभाविक हो । नेपालका राजाले पनि वीपीमा परेको अन्याय भनेको मलाई देश र जनतामा रहेछ भन्ने स्वीकारेकाे राजाकै आत्मा साक्षी छ । सत्य कुरा पनि त्यो नै हो ।
निष्ठाका धरोहर देश चिन्तक वीपीलाई स्वच्छन्दता र उनको त्यो जन मर्यादित लहरलाई टुलुटुलु हेर्ने भारतका प्रधानमन्त्रि ज्वाहारलाल नेहरुलाई र नेपालका राजालाई पनि कर्म कुञ्जमा अफ्ठ्यारो पर्नु त्यो एउटा समयले जिम्दारित्व प्रवेश गराएको महशुस हुनु अनर्थ नहुन पनि सक्दछ ।
सोझो सत्यको जीत हुन्छ । एउटा कुरा के हो भने वीपी एक यस्तो नेपाली पुत्र भित्र गणना हुन्छन् ।उनले जब चीनका माउत्सेतुङ्लाई टोपी उपहार दिँदा भनेका थिए, ‘‘मेरो देशको सगरमाथाको जस्तो उचाई छ तपाईलाई पनि त्यस्तै विचार राख्ने प्रेरणा मिलोस ।” वीपीले चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखेका थिए । समयचक्रका कारण हाम्रो देशभित्र विडम्बनाले बास गर्यो । त्यसकारण उन्नति गर्न देशमा ढिला भयो ।
उनकाे कालमा प्रजातन्त्र र एकल प्रणालीमा धेरै फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा सनसनीमा रह्यो । एक महान क्रान्तिका योद्दा थिए । उनको सिद्दान्तमा कृषि क्रान्ति शैक्षिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति , राष्ट्रवादी क्रान्ति, जनउनमुक्तिका क्रान्ति र देशलाई उज्यालो तर्फ लाने अहिंसाका क्रान्तिवाद थिए ।
वीपीका पालामा बिद्यालयहरु पर्याप्त मात्रामा खुलेका थिए । वीपीसँग राजमार्गका अवधारणाहरु प्रशस्तै आए । मेलमिलापतर्फका योद्दा पनि रहेका वीपी भन्थे, “छाप्रोबाट पनि शिक्षाको दियो चम्किन्छ । महल जति सुसज्जित भए पनि क्रुरमुखि भएमा अर्थविहिन छ । स–साना किसानहरुको आँगनमा गाईको बाच्छो लुटपुटिएको देख्न पाउनु पर्दछ ।”
वीपी एक दयाका पनि धरोहर हुनुहुन्थ्यो । उनी नरम र निडर रहेर कठोरतामा पनि उभिन सकने खुबि भएका व्यक्ति थिए । उनको राष्ट्र प्रेमको कुरा गर्ने हो भने उनले मात्रिका प्रसादलाई सम्म देशहितको लागि निस्काशन गरिदिनु भयो ।
वीपीबाट सिक्नु पर्ने कुरा र उनका आदर्शीता हाे । उनीसँग भएको प्रेमनीति हामीले अहिले पनि अनुशरण गर्न बाँकी नै छ । विद्वताका प्रतिक वीपीलाई नेपाली जनताले बहुमत दिएका थिए । उनी महान समाजवादी नेता थिए ।
उनलाई अन्यको ईशाराबाट राजाले अपदस्त गरेर प्रजातन्त्र खोसिए पछि पनि वीपी प्रत्येक जनकाे ढुकढुकीमा वास बसिरहे । विद्वताका प्रतिक वीपीलाई, उनको उदगार सधैँ छातीमा राख्ने नेपालीसित सच्चा राष्ट्रीयता हुन्छ । जय नेपाल ।
-कवि द्वारिका ढुङ्गाना
११ माघ २०७७, आईतवार १४:४१
घरबाट भागेर महेन्द्रनगर आएका देवर-भाउजूको मृत्यु
११ माघ २०७७, आईतवार १४:२८
१४ गते सुरु हुनेछ कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान
११ माघ २०७७, आईतवार १४:२०
नेकपा(प्रचण्ड-नेपाल)समूहको स्थायी कमिटी बैठक सुरु
११ माघ २०७७, आईतवार १४:०६
११ माघ २०७७, आईतवार १३:५३
११ माघ २०७७, आईतवार १३:३१
११ माघ २०७७, आईतवार १३:२५
दुरुपयोग रोक्न पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सुरक्षा कटौती तयारी
११ माघ २०७७, आईतवार १३:०९
११ माघ २०७७, आईतवार १२:२०
यो वर्षको अन्त्यसम्म पनि कोरोनाविरूद्ध ‘हर्ड इम्युनिटी’ हुँदैन: डब्लुएचओ
२८ पुष २०७७, मंगलवार ११:३६
संसद विघटन असंंवैधानिक- पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु
२४ पुष २०७७, शुक्रबार २०:५२
२२ पुष २०७७, बुधबार १०:१९
सुरक्षा निकायक भन्छन्: वैशाखमा निर्वाचन मुस्किल
२१ पुष २०७७, मंगलवार १३:०७
अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्य कता ?
२० पुष २०७७, सोमबार १२:४६
१६ पुष २०७७, बिहीबार ०९:१८
संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन : सभामुख सापकोटा
१६ पुष २०७७, बिहीबार ०८:४२
आज मेलमिलाप दिवस ? किन छ सान्दर्भिक ?
१६ पुष २०७७, बिहीबार ०५:३९